Nhau - Ichi Chigadzirwa Chiri Pasi Pasi Chinonyanya Kukosha kune Nyoro, Hutano Bvudzi
Zvakanyanya sekuda kwatinoita kudzikamisa maitiro edu ekugera musoro nekicheni-yakawanikwa hupfumi senge forogo (Ndine urombo, Ariel), kutenga bhurosi rakanakisa kuti rienderane nerudzi rwebvudzi rako, magadzirirwo, kureba, uye kudakadza zvaunofarira zviri kure nyore. Iyo bhurashi raunoshandisa kudzikamisa mapfumo kana kugovera conditioner uchiri mushower pamwe handizvo zvauchazoshandisa kufuridzira mabhuni ako. Uye nekuda kwekuti munhu mumwe chete anoda bhurashi rakamanikana rekutsvinyira kuti riwedzere vhoriyamu mune ravo bvudzi, hazvireve kuti mumwe munhu haazosarudze vhoriyamu-inosimudzira rakatenderera bhurasho panzvimbo. Ehezve, zvinhu zvinotonyanya kuomarara kana iwe ukashandisa chikamu chebvudzi rebhurosi remunhu waunofarira wekutengesa runako kana musoro kune yakatarwa webhusaiti webhusaiti kusarudza kubva kune akasiyana maunganidzwa uye mamodheru. Pane zvakawanda zvekusarudza uko kwakanakisa mabrashi emabvudzi ane hanya, uye nerombo rakanaka kwauri, takashatisa huwandu hwevanhu kusvika pa16 crème de la crème inotenga kushandira bhajeti rese, vhudzi mhando, uye dhayeti inoda.
Kunyangwe iwe uri mukuvhima bvudzi bvudzi idzva (kana maviri!) Kusangana nezvinodiwa nebvudzi rako uye dhayeti zvinoda kana uri kutarisira kupa chipo chakanakisa-chemhando yepamusoro kune mudiwa kana shamwari mwaka uno wezororo, chengeta scrolling! Isu takagadzira yekupedzisira shoppable runyorwa rweakanakisa bvudzi bhurashi mari inogona kutenga pazasi chete.
Kunyangwe hazvo munyori wengano anozivikanwa Vernon François achiti maoko ako neminwe ndizvo chaizvo zvishandiso zvakanaka kana zvasvika pakugadzira uye kushanda chigadzirwa kuburikidza nemataresi ako, iyi tatu-in-one yekumira muzinga yakanaka kupenya uye ndiyo mhinduro yakanyanya kune angangoita ese magadzirirwo anodikanwa. Iwe une muzinga wako wakakura-wemazino weunyoro asi unoshanda unodzikisira, muzinga wakamanikana-zino wekutsetseka uye kupatsanura, uye piki yekubata yekumhanyisa, kudhonza, uye kusimudzira masitayera ako neakawanda vhoriyamu.
Kunyanya yakanakisa yepakati-kune-gobvu, yakatwasuka-kune-wavy bvudzi, iri mbiri-bristle brashi kubva kuCrown Affair ndiyo crème de la crème. Yakagadzirwa nemaoko muItari, uye musanganiswa wakasarudzika wenguruve uye nylon bristles inoparadzira mafuta ako echisikigo kuti achengetedze tambo dzakapfava uye zvakapfava, zvinomutsa ganda rako rekumusoro kukurudzira kuyerera kweropa, kudzivirira hutachiona hunokanganisa, kunowedzera vhoriyamu yechisikigo, uye kunovimbisa follicles yako kuramba iri kumusoro-pamusoro chimiro.
Ibiza iri iyo chinamato-chinodiwa brashi brand pakati pevazhinji vanogera bvudzi. Iyo mhando inogadzira ingangoita mhando dzese dzebrashi pasi pezuva, uye inoisa pekutanga mhando. (Funga eco-inoshamwaridzika, inochinja-chinja asi inogadzikana kork yakatorwa kubva kuMediterranean uye siginecha yemasaini echisimba uye kupisa kupisa kabhoni fiber bristles kubva kuSpain.) Izvo zvakati, bangs inoda kutariswa kwakanyanya mudhipatimendi rekunyora, uye ichi ndicho chirevo chepamusoro ndatenda kune iyo mafuta- uye sebum-inogovera nguruve bristles, iyo inopa matani echisikirwo kupenya uye kupolisha.